JINGHPAW KASA: ဒေသခံတောင်သူနှင့် (L.G.M) ကုမ္မဏီ နှစ်ရှည် ပင်စိုက်ခင်း အငြင်းပွားမှု
၂၀၁၃ ဇွန်လိုင်လ (၁၈) ကြာသာပသေး ညနေပိုင်း ၂း၄၅ နာရီ အချိန် ကချင်ပြည်နယ် နန်းကွေ့ ကျေးရွှာ နှင့် နောင်းပုံရွာ ဒေသခံ ပြည်သူများလုပ်ကိုင် စားသောက်နေသော အရှေ့ဘက် နန်းကွေ့ချောင်း မြောက်ဘက် မနော့တောင် အနောက်ဘက် ပျဉ်ထောင်တောင် အရှေ့ဘက် သံလမ်း ပျဉ်ထောင် ပယ်ဖျက်တောင်ကို (L.G.M) ကုမ္မဏီပိုင်သော ဦးယိန်းချန်းသည် ထိုမြေလွတ် မြေရိုင်းကို နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ရန် (၁၉၆၇-၆၈ ခုနှစ်) တွင် ဦးပိုင်ပေါက် ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်အရာရှိ ကြီးများမှတဆင့် ၀ယ်ယူထားကြောင်းသိရှိ ရသည်။ သူပိုင်ဆိုင် သည့်အတွက် ဒေသခံ ပြည်သူများ သွားလမ်း ကို (Backfour) မြေတူးစက်ဖြင့် လမ်းပိတ်မြောင်းတူးခြင်း၊ လမ်းဖောက်ခြင်း ပြုလုပ်နေသည်ကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့် လူကြီးများ စုစုပေါင်း (၁၈) ယောက်တို့ သွားရောက်ပြီး (Backfour) စက်မောင်းဆရာနှင့် အလုပ်ကြပ် တို့ နှစ်ယောက်ကို အလုပ်ရပ်ဆိုင်းခိုင်းကြောင်း ပြေလည်သည်အထိ ဆွေးနွေးပြီးမှ ပြန်ဆက်လုပ်ရန်ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ဆက်လက်လုပ်ဆောင် လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကျေးရွာဒေသခံများ၏ ပြောပြချက်အရ- (L.G.M) ကုမ္မဏီ သည် (၁၀) နှစ်ကျော် နေပြီး မူလဓါးမ လက်ခုတ်၊ လက်ရာ ဘာမှ မတွေ့ရဘဲ အခုကျမှ သူ့နေရာဆိုပြီး အတင်းဖယ်ခိုင်းတာ မတရားကြောင်း၊သူနှင့် စကားပြောတဲ့အခါ ရဲဘော်ခေါ် လာတယ်၊ အာဏာရှင်ဆန်တယ် မတရားကြောင်း၊ ဒေသခံများစိတ်ညစ်နေကြောင်း ကြားသိရသည်။
zau lat said...
Jingphaw kasa nang kade chye na ndai shiga hpe mara ai ma. shiga hpe atsawm sha sagawn na mara ga .ya ten hta nawnpung mare masha ni shanhteasun ni manu lu ai majaw dut sha ma na mare masha 150 ram mahkawng la di masha niasun ni hpe hkan kashun hkawm nga ma ai lam ni hpe gaw nang chye ai i?
ndai hpung ni sa wa yang mung masha law law hte nhtu ni lang na sa wa wa re . dai hpe gaw nhkrit ra ai i?
wungpawng amyu sha shadaalapran atsawm nchye ai sha n mara ga.maga mi hpe sha yu na hkum ka.
Jing hpaw kasa e..Nang kadai re nchye tim naashigaamajaw Media langai hkrat sum mat na lam gaw myit yu ra na re..